Afarta boolis ee ku eedeysan dilka George Floyd oo midba midka kale ku eedeynaya dhimashadiisa | Somalia News
Shalay oo Jimco aheyd waxaa maxkamad lasoo taagay afartii booliska aheyd ee ku eedeysan dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah kaas oo dilkiisa ay ka dhasheen dibedbaxyo gil-gilay Mareykanka ilaa iyo walina taagan saameyntiisa.
Afartuba waxa ay qireen in laga fogaan karay dilka Floyd, bakse ma jirin mid si gaar ah u sheegtay masuuliyadda dhimashadiisa.
Lane iyo Thao oo labaduba ku cusbaa booliska ayaa sheegay in taliye Derek Chauvin oo askariga qoorta uga istaagay uu howlgalkaasi hoggaaminayay, halka uu qudhiisu sheegay in uu yimid xilli mar horeba la qabtay Floyd uuna ku caawiyay keliya dhul-dhigid.
Qareenka Chauvins oo lagu magacaabo Eric Nelson ayaa dhankiisa sheegay in Floyd uu u geeriyooday daroogo uu iska badiyay islamarkaana aan dusha laga saarin dilkiisa kiliyantigiisa.
Xukunka askartan ayaa la qorsheeyay in uu dhoco bisha Maarso ee sannadka soo socda.
Previous articleDonald Trump oo dal labaad oo carbeed ku cadaadiyay aqoonsiga Israel
Next articleVIDEO: Askari biladda ugu sarreysa ciidamada ku helay maxaabiis uu kasoo bad-baadiyay ISIS